ERP အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် Local support ၏ အခန်းကဏ္ဍ
Posted by Vanguard on: October 5, 2016
ကျွန်တော်တို ့သည် တန်ဖိုးအသင့်တင့် (သို ့မဟုတ်) တန်ဖိုးြကီး အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတစ်ခုခု (လျှပ်စစ်ပစ္စည်း၊ ကွန်ြပူတာများ၊ ကား အစရှိသည်) အား ဝယ်ယူသည့် အခါတိုင်းတွင် ရောင်းြပီးဝန်ဆောင်မှု (Aftersales Service) ကို အလေးထား၍ မေးလေ့ရှိြကပါသည်။ အဘယ့်ေြကာင့်ဆိုသော် မိမိတို့ အသုံးြပုနေစဉ် ကာလ အတွင်း ထိုပစ္စည်းနှင့် ပတ်သက်၍ (ပျက်စီးသွား၍သော်လည်းကောင်း ထိန်းသိမ်းရန် လိုအပ်သောအခါတွင်သော် လည်းကောင်း) ဝန်ဆောင်မှုတစ်စုံတရာကို လိုအပ်သောအခါတွင် အ ြမန်ဆုံးပေးနိုင်မှသာလျှင် အဆင်ေြပချော မွှေ့နိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ထို့ေြကာင့် ရောင်းချသူဘက်မှ Read More >
ြမန်မာနိုင်ငံတွင် ERP အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် တွေ့ြကုံရမည့် စိန်ခေါ်မှုများ
Posted by Vanguard on: September 20, 2016
Organizational Changes - လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ေြပာင်းလဲြခင်းများ။ ERP အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် နေ့စဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော လုပ်ငန်းဆောင်တာနှင့်အလေ့အထများတွင် သိသာထင်ရှား သော ေြပာင်းလဲမှုများ လိုအပ်လာနိုင်သည်။ ထို့အ ြပင် လုပ်ငန်း၏ အဓိကကျသော ဆောင်ရွက်ပုံများအား အ ေြခခံ အဆင့်မှစတင်ြပီး ြပန်လည်လေ့လာဆန်းစစ်ြခင်း၊ သမားရိုးကျဆောင်ရွက်ခဲ့သော လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပုံများကို ေြပာင်းလဲြခင်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ် များအား တာဝန်ြပန်လည်ချထားပေးြခင်းတို့ကိုလည်း လိုအပ်ပါသည်။ Check and Balanced - စီစစ်ြခင်းနှင့် စာရင်းကိုက်ြခင်း။ ERP စနစ်သည် လုပ်ငန်းအသီးသီးမှစာရင်းများ Read More >
Posted by Vanguard on: December 1, 2015
Credit Patrick Willer Big Data + Technology Can you change? Of course you can. Everybody changes every day. But how versatile, agile, and quick can you adapt yourself and your organization to stay relevant in today’s society? Organizations are always Read More >
Posted by Vanguard on: October 6, 2015
A Single System to Manage Your Business
Posted by Vanguard on: September 14, 2015
#SAPB1, #SAP, #ERP
READY FOR SAP B1 HANA
Posted by Vanguard on: August 7, 2015
CONGRATULATIONS to our team member Mr. Aung Thit Lu and Mr. Htet Myat Naing who are successfully achieved certificates from Linux Professional Institute Certified LPIC Level 1 and SUSE Certified Linux Administrator. Now we are ready to rock on SAP B1 Read More >
Posted by Vanguard on: July 27, 2015
SAP HANA available in Myanmar for growing SME business
Posted by Vanguard on: May 6, 2015
Grow your margins and your company – with small business management software powered by SAP HANA Get big company performance atasmall company price – with SAP Business One, version for SAP HANA. This small business management software, Read More >